Tyer killer mhirizhonga
Tsanangudzo:tire killer mechanism, tire killer machine, automatic tire killer, tire killer gadget,,
Home > Products > Tyer Killer Barrier
Zvigadzirwa zve Tyer Killer Barrier , isu tiri vashandi vanobva kuChina, tire killer mechanism , tire killer machine vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve automatic tire killer R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
kwete-akabatwa Tyer killer mhirizhonga  Bata Ikozvino
Unit Price: USD 498 / Meter
Packaging: Pepa, matanda
Kupa Mazano: 2000 meters per month
Asina-vakaroora vanga muurayi Automatic Tire Killer, Tire Killer Gadhijeni, Tire Killer machine: Components: 1, nzvimbo yekushanda ye iyo nzvimbo inokosha inopindirana nekudzivirira kuchengetedzwa 2, iyo yose yezvinhu A3 zvose zvigadzirwa zvesimbi...
China Tyer Killer Barrier Vatengi
Izvo sangano rinosanganisira Bhokisi Rokuchengetedza uye nhatu Plate nema spikes sezvakajairika.
Zvakanaka kuti dzichengetedzwe munzvimbo dzakanyanya uye dzakachengeteka dzakadai semabhangi, zvigaro zvehondo, zviteshi zvezvikwata, mamishinari nezvimwe, T vaurayi vanoita zvakanyanya zvakagadzirirwa simbi nemidziyo inobva pamba yesimbi.
Dhinda bhodhi 'ON' paMutevedzeri Wemharaunda, mapikisi ose achamuka achizvimirira uye orega nzira imwe chete yemugwagwa chete. Bvumira kugona kwemigwagwa mune imwe nzira, kuisa matairi emotokari ichibva kune imwe nzvimbo.
Dhinda bhatani 'DOWN' paMutevedzeri Wakadzika, zvose zvinyorwa zvichanyura pakarepo. Nenzira iyi wozobvumira nzira mbiri.
Bvumira kugona kwemigwagwa mune imwe nzira, kuisa matairi emotokari ichibva kune imwe nzvimbo.
Inodzorwa neMutevedzeri Wemharadzano seyero (Wire Control inofanirwa).
Kushanda Voltage iri 220V seyero (Volati inogona kugadzirwa)
Plug inogona kuva yeBritish Style kana yeEurope style (Plug inogona kugadzirwawo zvakare)
Inopiwa ne 2 Remote controllers seyero
Poda yakavharwa seyero
tire killer mechanism tire killer machine automatic tire killer tire killer gadget